तीन दिन भारी वर्षाको सम्भावना ! कहाँ–कहाँ छ बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम ? - Shikhar Post Shikhar Post
तीन दिन भारी वर्षाको सम्भावना ! कहाँ–कहाँ छ बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम ?
काठमाडौं, १९ असार । नेपालमा दिनहुँ मनसुन सक्रिय बन्दै गइरहेको छ । अबको तीन दिन मनसुन थप सक्रिय हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ ।
मौसमविद्का अनुसार बुधबार र बिहीबार मनसुन सामान्य अवस्थामा रहेका कारण यी दुई दिन तुलनात्मक रूपमा वर्षा केही कम भइरहेको थियो । तर आजबाट मनसुन पुनः ‘एक्टिभ’ भएका कारण वर्षाको मात्रा बढ्ने भएको हो ।
‘हामी सामान्यतया ७२ घण्टा (तीन दिन) को मौसम अनुमान गर्छाैं,’ मौसमविद् गंगा नगरकोटीले भनिन्, ‘यस अवधिभर वर्षा अलि बढी हुने सम्भावना देखिएको छ ।’
अहिले प्रदेश ५, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका धेरैजसो ठाउँमा पानी परिरहेको छ । दिउँसो यी ठाउँसँगै वाग्मती प्रदेश, प्रदेश १ र प्रदेश २ मा पनि ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद् गंगा नगरकोटीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार लगातार ठूलो पानी पर्ने सम्भावना भने छैन ।
मेघ गर्जन र चट्याङसहित एकछिन पानी पर्दै एकछिन रोकिने क्रम चल्ने उनले जानकारी दिइन् । राति पनि देशका सबै प्रदेशहरुमा सामान्य बदली रही कर्णाली प्रदेशका थोरै ठाउँहरुमा र बाँकी प्रदेशका धेरै ठाउँहरुमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।
प्रदेश १, प्रदेश २, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै ठाउँमा भने राति पनि ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको उनले बताइन् । वर्षाका कारण नदीनालामा पानीको सतह बढ्ने, पहिरो जाने र डुबानको समस्या हुन सक्ने भएकाले सुरक्षित र सतर्क हुन मौसमविदले आग्रह गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, १९ असार २०७७ ०९:२०